မွိတျကြှနျးစု တလှားက ကြှနျးတှအေကွောငျး - Thutazone
မွိတျကြှနျးစု တလှားက ကြှနျးတှအေကွောငျး
မွိတျကြှနျးစုသညျ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ပါဝငျကာ မွနျမာနိုငျငံ၏ တောငျဖကျစှနျးတှငျ တညျရှိသညျ။ အရှယျအစား အမြိုးမြိုးရှိသော ကြှနျးပေါငျး ၈၀၀ ကြျောခနျ့ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားသညျ။ မလေး ကြှနျးဆှယျ၏ အနောကျဖကျကမျးခွဖေကျရှိ ကပ်ပလီပငျလယျတှငျးတှငျ တညျရှိသညျ။ တဈခါတဈရံ ပသြှူးကြှနျးစုဟုလညျး ချေါဆိုလရှေိ့သညျ။
ကတနျကြှနျးသညျ မွိတျကြှနျးစုရှိ အကွီးဆုံးကြှနျးဖွဈပွီး စတုရနျးမိုငျပေါငျး ၁၇၀ ကယျြဝနျးကာ ‌မွိတျမွို့ အနောကျဘကျ ၁၀ မိုငျခနျ့အကှာတှငျ ရှိသညျ။ ဒုတိယအကွီးဆုံးကြှနျးက ကကျသရငျး ကြှနျး ဖွဈကာ၊ တောဖုံးနပွေီး ကမျးစပျ၌ လမုတောမြား ပေါကျရောကျနသေညျ။ အခွား ထငျရှားသော ကြှနျးမြားမှာ – ပွငျစဘုကြှနျး ၊ ခရစ်စတီးကြှနျး၊ ဒေါငျးကြှနျး ၊ ကှမျးသီးကြှနျး ၊လမငျးကြှနျး ၊ လနျပိကြှနျး ၊လကျစှပျအျောကြှနျး ၊မလိကြှနျး ၊ ငှကြှေနျး ၊စခနျးသဈကြှနျး ၊ တနင်ျသာရီကြှနျး ၊သူဌေးကြှနျး ၊သံကြှနျး နှငျ့ သရောသဟနျကြှနျးတို့ ဖွဈကွသညျ။
ကတနျကြှနျး သညျ မွိတျကြှနျးစုအတှငျးရှိ အကွီးဆုံးကြှနျးဖွဈကာ ၄၅၀ စတုရနျးကီလိုမီတာ ကယျြဝနျးသညျ။ ကြှနျးရှိ French Bay Peak သညျ ၇၆၇ မီတာ (၂၅၁၆ ပေ) မွငျ့ကာ မွိတျကြှနျးစုတှငျ အမွငျ့ဆုံးနရောဖွဈသညျ။ ဗွိတိသြှအုပျစိုးစဉျအခါက ဘုရငျကြှနျး King’s Island ဟု ချေါဝျေါခဲ့သျောလညျး နောကျပိုငျးတှငျ ဒသေအချေါအဝျေါဖွဈသညျ့ ကတနျကြှနျးဟု ပွောငျးလဲခဲ့သညျ။
မွိတျမွို့၏အနောကျဘကျ ၁၀မိုငျခနျ့အကှာတှငျတညျရှိသညျ။ ကြှနျးအလြား ၂၃ မိုငျခနျ့ရှိပွီး အနံသညျ ၁၁မိုငျခနျ့ရှိသညျ။ ကြှနျးပျေါမှ အမွငျ့ဆုံးတောငျသညျ ပပေေါငျး ၂၅၃၀ ပေ ရှိသညျ။ ယခုအခါ ကြှနျးစုမွို့တညျရှိပွီ ရတေပျစခနျးဌာနခြုပျ ရှိရာ ကြှနျးဖွဈသညျ။
မွိတျမွို့၏တောငျဘကျ မိုငျ ၄၀အကှာတှငျရှိသညျ။ အလြား ၁၈ မိုငျ အနံ ၁၁မိုငျကယျြသညျ။ မွောကျပိုငျးတှငျ ကယျြ၍ တောငျဘကျတှငျ စုခြှနျသှားသညျ။ အမွငျ့ဆုံးတောငျမှာ ပေးပေါငျး ၁၁၇၀ မွငျ့သညျ။ တောမြားဖုံးလှမျးနပွေီး ကမျးစပျတှငျ လမုတောမြားရှိသညျ။
တတိယအကွီးဆုံးကြှနျး မွိတျမွို့၏အနောကျတောငျဘကျ မိုငျ ၁၅၀ ခနျ့အကှာ ကော့သောငျးမွို့နယျအတှငျးရှိ ကြှနျးကွီး တဈကြှနျးဖွဈသညျ။ အလြား ၁၈မိုငျ အနံ ၇ မိုငျကယျြသညျ။ကြှနျး၏အမညျဟောငျးမှာ စိနျ့မကျသရူး (Saint Mathew island) ဖွဈသညျ။ ယခု မွနျမာ့တပျမတျော ရတေပျစခနျးရှိရာ ဇာဒကျကွီးကြှနျးဖွဈသညျ။
ကှမျးသီးကြှနျး သညျ မွိတျကြှနျးစုတှငျ ပါဝငျသော ကြှနျးတဈခုဖွဈကာ ၇ ကီလိုမီတာခနျ့ ရှညျလြားသညျ။ လေးထောငျ့ဆနျဆနျ ပုံသဏ်ဌာနျရှိကာ တနင်ျသာရီကြှနျး၏ မွောကျဖကျ ၁၅ ကီလိုမီတာခနျ့အကှာ မွိတျကြှနျးစု၏ အနောကျမွောကျဖကျစှနျးတှငျ တညျရှိသညျ။ သဈပငျမြားနှငျ့ တောငျကုနျးထူထပျသော ကြှနျးဖွဈသညျ။ အမွငျ့ဆုံးနရောမှာ ၃၉၆ မီတာမွငျ့သညျ။
တနင်ျသာရီကြှနျး သညျ မွိတျကြှနျးစုတှငျ ပါဝငျသော ကြှနျးတဈခုဖွဈသညျ။ ကှမျးသီးကြှနျး၏ တောငျဖကျ ၁၅ ကီလိုမီတာအကှာ၊ မွိတျကြှနျးစု၏ အနောကျမွောကျဖကျစှနျးတှငျ တညျရှိသညျ။ ၁၀ ကီလိုမီတာခနျ့ ရှညျလြားပွီး မညီမညာပုံသဏ်ဌာနျရှိသညျ့ ကြှနျးဖွဈသညျ။ တောထူထပျသညျ့ကြှနျးတဈခုဖွဈကာ ၄၉၄ မီတာအမွငျ့ရှိသော မတျစောကျသညျ့ တနင်ျသာရီတောငျထှတျသညျ ကြှနျးရှိ အမွငျ့ဆုံးနရော ဖွဈသညျ။
နတျသမီးရတှေငျးကြှနျး သညျ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ မွိတျကြှနျးစုမြားအတှငျး၊ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျဝယျ မွောကျလတ်တီကြု ၁၂°၀၃’၅၅.၈၄၉” နှငျ့ အရှလေ့ောငျဂြီကြု ၈၉°၀၀’၅၁.၉၁၀” တှငျ ရှိသညျ့ ကြှနျး တဈကြှနျး ဖွဈပွီး၊ ဝဟေငျမှ ရှုမြှျောပါက နတျသမီးတပါး ကနဟေနျ ရှိသညျ။ ကြှနျး တခုလုံး၏ မွအေကယျြအဝနျးမှာ ဧက ၅၀၀ ခနျ့ရှိကာ၊ အရှအေ့နောကျ အရှညျ ၃.၂၁ ကီလိုမီတာ၊ တောငျမွောကျအကယျြ ၂ ကီလိုမီတာ ရှိသညျ။ ယနထေိ့တိုငျ ခုတျလှဲခွငျး မခံရသေးသော မူလသဈပငျကွီးမြားစှာ ပေါကျရောကျနကော၊ ကမျးခွတှေငျ နူးညံ့သနျ့ရှငျးသညျ့ သဲသောငျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး၊ ကြောကျဆောငျမြားမှာ ထညျဝါသညျ။
မလိကြှနျး သညျ မွိတျကြှနျးစုတှငျ ပါဝငျသညျ့ ကြှနျးတဈခုဖွဈသညျ။ မွိတျကြှနျးစု၏ မွောကျဖကျအစှနျဆုံးတှငျ တညျရှိသညျ။ ၉၉ စတုရနျးကီလိုမီတာ ကယျြဝနျးပွီး မွောကျမှတောငျသို့ ၃၁ ကီလိုမီတာရှိသော ရှညျလြားသေးသှယျသညျ့ ကြှနျးဖွဈသညျ။
လနျပိကြှနျး သညျ မွိတျကြှနျးစုရှိ ကြှနျးဖွဈပွီး ၁၈၈ စတုရနျးကီလိုမီတာ ကယျြဝနျးကာ မွိတျကြှနျးစုတှငျးရှိ အကွီးဆုံးကြှနျးမြားတှငျ ပါဝငျသညျ။၂၀၀၄ ခုနှဈ အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာ ငလငျြနှငျ့ ဆူနာမီကွောငျ့ လနျပိကြှနျးရှိ ဆလုံလူမြိုး ၂၀၀ ခနျ့ သဆေုံးခဲ့သညျ။ မွနျမာနိုငျငံ၏ တဈခုတညျးသော အဏ်ဏဝါအမြိုးသားဥယြာဉျဖွဈသညျ့ လနျပိကြှနျး အဏ်ဏဝါအမြိုးသားဥယြာဉျကို ၁၉၉၆ ခုနှဈတှငျ ဖှငျ့လှဈခဲ့သညျ။
သူဌေးကြှနျး သညျ မွိတျကြှနျးစုရှိ ကြှနျးငယျတဈခုဖွဈသညျ။ ကော့သောငျးမွို့နှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး ရနောငျးမွို့တို့၏ အနီးတှငျ တညျရှိသညျ။ သူဌေးကြှနျးကို မွနျမာနိုငျငံအစိုးရမှ ထိုငျးနိုငျငံအခွစေိုကျ VSE Group ထံသို့ ခရီးသှားလုပျငနျးအတှကျ နှဈရှညျငှားရမျးထားသညျ။ ကြှနျးပျေါတှငျ အကျဒမနျကလပျ အမညျရ ကွယျငါးပှငျ့အဆငျ့ရှိ ကာစီနိုနှငျ့ အပနျးဖွဂေေါကျကှငျးကို ဖှငျ့လှဈထားသညျ။
ညောငျဦးဖီးကြှနျးသညျ ကော့သောငျးမွို့နှငျ့ ရမေိုငျ ၄၂မိုငျ အကှာအဝေးတှငျ တညျရှိသညျ။ ထိုကြှနျးသို့သှားသညျ့လမျးတလြှောကျတှငျ ဇာဒတျကွီး၊ ဇာဒတျကလေး နှငျ့ တခွားကြှနျးမြားကို ကြျောဖွတျသှားရမညျဖွဈပွီး Speed boat နှငျ့ သှားလြှငျ ၁၅မိနဈခနျ့ကွာမွငျ့မညျဖွဈသညျ။ ထိုကြှနျးပျေါတှငျ ဖွူဖှေးသောသဲသောငျပွငျ ၊ ရပေျေါရအေောကျရှု့ခငျးမြားနှငျ့ သန်တာ ကြောကျတနျးမြား၏ အလှအပမြားကို ခံစားရမညျ ဖွဈသညျ။
တငျနိုငျတိုး (ဒီဇငျဘာလ၊ ၂၀၁၃). မွနျမာပွညျတဈခှငျ လမျးညှနျ
ဦးစိုးနိုငျ (၂၀၁၅-၂၀၁၆). မွိတျကြှနျးစုရှိ ကြှနျးမြား(Drakes island)တှငျ တှရှေိ့ရသော ငှကျမြိုးစိတျမြား
မြိတ်ကျွန်းစု တလွှားက ကျွန်းတွေအကြောင်း
မြိတ်ကျွန်းစုသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဖက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိသော ကျွန်းပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ခန့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မလေး ကျွန်းဆွယ်၏ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေဖက်ရှိ ကပ္ပလီပင်လယ်တွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပသျှူးကျွန်းစုဟုလည်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။
ကတန်ကျွန်းသည် မြိတ်ကျွန်းစုရှိ အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီး စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၇၀ ကျယ်ဝန်းကာ ‌မြိတ်မြို့ အနောက်ဘက် ၁၀ မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရှိသည်။ ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းက ကက်သရင်း ကျွန်း ဖြစ်ကာ၊ တောဖုံးနေပြီး ကမ်းစပ်၌ လမုတောများ ပေါက်ရောက်နေသည်။ အခြား ထင်ရှားသော ကျွန်းများမှာ – ပြင်စဘုကျွန်း ၊ ခရစ္စတီးကျွန်း၊ ဒေါင်းကျွန်း ၊ ကွမ်းသီးကျွန်း ၊လမင်းကျွန်း ၊ လန်ပိကျွန်း ၊လက်စွပ်အော်ကျွန်း ၊မလိကျွန်း ၊ ငွေကျွန်း ၊စခန်းသစ်ကျွန်း ၊ တနင်္သာရီကျွန်း ၊သူဌေးကျွန်း ၊သံကျွန်း နှင့် သရောသဟန်ကျွန်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကတန်ကျွန်း သည် မြိတ်ကျွန်းစုအတွင်းရှိ အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ကာ ၄၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ ကျွန်းရှိ French Bay Peak သည် ၇၆၇ မီတာ (၂၅၁၆ ပေ) မြင့်ကာ မြိတ်ကျွန်းစုတွင် အမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှအုပ်စိုးစဉ်အခါက ဘုရင်ကျွန်း King’s Island ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဒေသအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်သည့် ကတန်ကျွန်းဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
မြိတ်မြို့၏အနောက်ဘက် ၁၀မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်းအလျား ၂၃ မိုင်ခန့်ရှိပြီး အနံသည် ၁၁မိုင်ခန့်ရှိသည်။ ကျွန်းပေါ်မှ အမြင့်ဆုံးတောင်သည် ပေပေါင်း ၂၅၃၀ ပေ ရှိသည်။ ယခုအခါ ကျွန်းစုမြို့တည်ရှိပြီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ရှိရာ ကျွန်းဖြစ်သည်။
မြိတ်မြို့၏တောင်ဘက် မိုင် ၄၀အကွာတွင်ရှိသည်။ အလျား ၁၈ မိုင် အနံ ၁၁မိုင်ကျယ်သည်။ မြောက်ပိုင်းတွင် ကျယ်၍ တောင်ဘက်တွင် စုချွန်သွားသည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်မှာ ပေးပေါင်း ၁၁၇၀ မြင့်သည်။ တောများဖုံးလွှမ်းနေပြီး ကမ်းစပ်တွင် လမုတောများရှိသည်။
တတိယအကြီးဆုံးကျွန်း မြိတ်မြို့၏အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၁၅၀ ခန့်အကွာ ကော့သောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျွန်းကြီး တစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ အလျား ၁၈မိုင် အနံ ၇ မိုင်ကျယ်သည်။ကျွန်း၏အမည်ဟောင်းမှာ စိန့်မက်သရူး (Saint Mathew island) ဖြစ်သည်။ ယခု မြန်မာ့တပ်မတော် ရေတပ်စခန်းရှိရာ ဇာဒက်ကြီးကျွန်းဖြစ်သည်။
ကွမ်းသီးကျွန်း သည် မြိတ်ကျွန်းစုတွင် ပါဝင်သော ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ကာ ၇ ကီလိုမီတာခန့် ရှည်လျားသည်။ လေးထောင့်ဆန်ဆန် ပုံသဏ္ဌာန်ရှိကာ တနင်္သာရီကျွန်း၏ မြောက်ဖက် ၁၅ ကီလိုမီတာခန့်အကွာ မြိတ်ကျွန်းစု၏ အနောက်မြောက်ဖက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ သစ်ပင်များနှင့် တောင်ကုန်းထူထပ်သော ကျွန်းဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ၃၉၆ မီတာမြင့်သည်။
တနင်္သာရီကျွန်း သည် မြိတ်ကျွန်းစုတွင် ပါဝင်သော ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွမ်းသီးကျွန်း၏ တောင်ဖက် ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာ၊ မြိတ်ကျွန်းစု၏ အနောက်မြောက်ဖက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၀ ကီလိုမီတာခန့် ရှည်လျားပြီး မညီမညာပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့် ကျွန်းဖြစ်သည်။ တောထူထပ်သည့်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ကာ ၄၉၄ မီတာအမြင့်ရှိသော မတ်စောက်သည့် တနင်္သာရီတောင်ထွတ်သည် ကျွန်းရှိ အမြင့်ဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်။
နတ်သမီးရေတွင်းကျွန်း သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ကျွန်းစုများအတွင်း၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ဝယ် မြောက်လတ္တီကျု ၁၂°၀၃’၅၅.၈၄၉” နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၈၉°၀၀’၅၁.၉၁၀” တွင် ရှိသည့် ကျွန်း တစ်ကျွန်း ဖြစ်ပြီး၊ ဝေဟင်မှ ရှုမျှော်ပါက နတ်သမီးတပါး ကနေဟန် ရှိသည်။ ကျွန်း တခုလုံး၏ မြေအကျယ်အဝန်းမှာ ဧက ၅၀၀ ခန့်ရှိကာ၊ အရှေ့အနောက် အရှည် ၃.၂၁ ကီလိုမီတာ၊ တောင်မြောက်အကျယ် ၂ ကီလိုမီတာ ရှိသည်။ ယနေ့ထိတိုင် ခုတ်လှဲခြင်း မခံရသေးသော မူလသစ်ပင်ကြီးများစွာ ပေါက်ရောက်နေကာ၊ ကမ်းခြေတွင် နူးညံ့သန့်ရှင်းသည့် သဲသောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ ကျောက်ဆောင်များမှာ ထည်ဝါသည်။
မလိကျွန်း သည် မြိတ်ကျွန်းစုတွင် ပါဝင်သည့် ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြိတ်ကျွန်းစု၏ မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးတွင် တည်ရှိသည်။ ၉၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး မြောက်မှတောင်သို့ ၃၁ ကီလိုမီတာရှိသော ရှည်လျားသေးသွယ်သည့် ကျွန်းဖြစ်သည်။
လန်ပိကျွန်း သည် မြိတ်ကျွန်းစုရှိ ကျွန်းဖြစ်ပြီး ၁၈၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ မြိတ်ကျွန်းစုတွင်းရှိ အကြီးဆုံးကျွန်းများတွင် ပါဝင်သည်။၂၀၀၄ ခုနှစ် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ငလျင်နှင့် ဆူနာမီကြောင့် လန်ပိကျွန်းရှိ ဆလုံလူမျိုး ၂၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော အဏ္ဏဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်သည့် လန်ပိကျွန်း အဏ္ဏဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သူဌေးကျွန်း သည် မြိတ်ကျွန်းစုရှိ ကျွန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော့သောင်းမြို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရနောင်းမြို့တို့၏ အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ သူဌေးကျွန်းကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် VSE Group ထံသို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းထားသည်။ ကျွန်းပေါ်တွင် အက်ဒမန်ကလပ် အမည်ရ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိ ကာစီနိုနှင့် အပန်းဖြေဂေါက်ကွင်းကို ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ညောင်ဦးဖီးကျွန်းသည် ကော့သောင်းမြို့နှင့် ရေမိုင် ၄၂မိုင် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုကျွန်းသို့သွားသည့်လမ်းတလျှောက်တွင် ဇာဒတ်ကြီး၊ ဇာဒတ်ကလေး နှင့် တခြားကျွန်းများကို ကျော်ဖြတ်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး Speed boat နှင့် သွားလျှင် ၁၅မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းပေါ်တွင် ဖြူဖွေးသောသဲသောင်ပြင် ၊ ရေပေါ်ရေအောက်ရှု့ခင်းများနှင့် သန္တာ ကျောက်တန်းများ၏ အလှအပများကို ခံစားရမည် ဖြစ်သည်။
တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်
ဦးစိုးနိုင် (၂၀၁၅-၂၀၁၆). မြိတ်ကျွန်းစုရှိ ကျွန်းများ(Drakes island)တွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်မျိုးစိတ်များ